I-China Crown Shaped Gold Acrylic Jar ye-Cream factory kunye nabanikezeli |Sengmi
Inombolo yomzekelo: A20
Ingqayi yeGold Acrylic Jar ye-Luxury Crown-shaped Gold Acrylic for Cream.
ITanki yangaphakathi yePP emhlophe.
Ibandakanya iCap enemibala emininzi kunye nePatch yokutywina.
A20I-Acrylic Cream Jar
Ngokuqhelekileyo i-MOQ 3000pcs, inokuvelisa nawuphi na umbala, i-50% ye-Deposit, ixesha lokukhokela i-Factory 25- 30days.
I-MOQ 100PC, ilungele ukuthunyelwa, ithengiswa kwimeko ekhoyo, akukho ngokwezifiso, akukho kushicilela
Inkxaso yesampuli Ukubonelela ngesampulu ye-ex-stock simahla, Ukuthumela kwangaphambili okanye kuqokelelwe ngumthengi, ngokuqhelekileyo i-15- 20USD.
Le ngqayi ye-acrylic emile okwesithsaba sisikhongozeli esihle somgangatho ophezulu esinokusetyenziselwa izinto zokuthambisa kunye neemveliso zokhathalelo lwesikhumba, kubandakanya i-moisturizer, ikhrimu yobuso, ikhrimu yamehlo, umgubo omenyezelayo, ibhotolo yomzimba, i-lip balm, i-lip scrub, i-ointments, iisalves, njl.
Le ngqayi yeplastiki yodonga oluphindwe kabini yenziwe nge-screw cap yangaphandle, umzimba wejagi, itanki yangaphakathi kunye nesivalo sangaphakathi.Esi sakhiwo somelele kwaye somelele sinokuqinisekisa ukuba ingqayi ingena moya kwaye ithintele ukuba ingavuzi okanye ifumane amabala.
Le ngqayi yenziwe ngemathiriyeli eyaziwayo nekumgangatho ophezulu- Acrylic, ekwaziyo ukumelana nokusingqongileyo kunye nemathiriyeli enokuphinda isetyenziswe, neyenza ingqayi yomelele kwaye yomelele.
Ubungakanani obuncinci kunye nobunzima obulula kwenza kube lula ukuba abantu bathathe kuyo nayiphi na indawo.Kulula ukuyiphatha, kulula ukuyisebenzisa kwaye icocekile.
Sixhasa ukuthunyelwa ngenqanawa nge-Air Express kunye noLwandle.
Nceda usithumelele ikhowudi yakho ye-zip kwaye usixelele ubungakanani obufunekayo ukujonga iindleko zokuthumela.
Sinemizi-mveliso emibini esekwe eTshayina, le ngqayi isoloko ikwisitokhwe ukuhlangabezana nemfuno yakho engxamisekileyo.
Ukuhanjiswa ngokuqhelekileyo kuya kuthunyelwa ngaphandle kweentsuku ezi-2.
Kuya kuthatha malunga neentsuku ezi-7 ukufika kwilizwe lakho.
2. Ukuprintwa kweleyibhile: Iscreen/ ukuprintwa kwesilika, isitampu esishushu kunye nokunye ukuphatha umphezulu.
Ngaphambili: IJar yeDayimane eNcinciweyo yePlastiki eCream engenanto
Okulandelayo: I-Acrylic yePlastiki ephindwe kabini yeeJar zeCream zokuthambisa
Airless Black ibhotile, Ibhotile engenamoya eNtofontofo, Ibhotile yeToner yesilwanyana, Ibhotile yesirinji engenamoya, 60ml Airless ibhotile, Ingqayi engenamoya,